PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-01-10 - Basinde kukubi kushay­isana iz­imoto
Basinde kukubi kushay­isana iz­imoto
Eyethu Baywatch - 2018-01-10 - NEWS • IZINDABA - Muzi Zin­c­ume
KULIMALE abantu aba­bili nge­sikhathi kushay­isana imoto kanye ne-Am­bu­lense ez­im­pam­ban­weni zomg­waqo uNg­welezana Road kanye no Cop­per Drive ngas­esiteshini eM­pan­geni.
Len­gozi es­hiye i- Am­bu­lense ilele ngohlangothi yen­zeke ngoLwe­si­bili em­ini be­bade,kanti oz­i­bonele ngamehlo usola ukuthi i-Am­bu­lense in­gene kulezi zim­pam­bano irobothi li­valile yabe sey­ishay­isana nale­moto yohlobo lweVW Po­lio.
‘Le­moto es­hay­isane neyeziguli ibi­hamba kuNg­welezana Road ilib­hekise ngaseNg­welezane kanti i-Am­bu­lense yona ibiqhamuka ngaseNg­welezane izo­jikela kuCop­per Drive nge­sikhathi kwen­zeka len­gozi,’kubeka obe­sendaweni yesehlakalo.
Okhu­lumela amaphoy­isa aseM­pan­geni, uKap’teni Mbon­geni Md­lalose, uthe bengamaphoy­isa bathole umbiko othi ku­so­lakala ukuthi i-Am­bu­lanse ay­ilin­danga amarob­hothi aze ayivumele ivele yan­gena yase ih­langana nemoto ebi­hamba abantu aba­bili okun­gowe­sil­isa kanye nowe­si­fazane.zabe sezishay­isana maqede yalala ngohlangothi noku­bikwa ukuthi obey­ishayela aka­phu­manga namy­ocu.
Obe­shayela imoto en­cane kanye nobe­hamba naye ba­phuthun­y­iswe es­ib­hedlela ukuyothola uk­we­lashwa njen­goba bathole ukuli­mala okun­ga­th­eni ku­len­gozi,’ kubeka uKpt. Md­laolose.
UMd­lalose uqhube wathi kuy­i­manje baphenya icala lokushayela bud­e­dengu kanti akuk­a­boshwa muntu.
Two peo­ple rushed to Ng­welezana Hospi­tal af­ter a col­li­sion be­tween an am­bu­lance and a car
Amaphoy­isa ebe­matasa eqoqa ub­u­fakazi en­daweni yesahlakalo